Mawiricheya Makushoni - Wiricheya Zvishongedzo
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo
Categories: Mazuva ese Aids, Wiricheya Zvishongedzo Tags: cushion, masisito, ergonomic pamutsago, furo pamutsago, gel pamutsago
Gel Foam hwiricheya Makuseni
Gel Foam hwiricheya Seat Cushion yakagadzirirwa neyakagadzikana uye yekumanikidza kuregererwa mupfungwa. Mushoni unovakwa nejeladhibiya rakakomberedzwa nehupamhi hwehuputi hwekuumbika zvakanaka kumushandisi. Sebhonasi yakawedzerwa, chifukidzo chinofema chinogona kubviswa uye kushambidzwa nyore kuti uve nehutano hwakachengeteka. Zvese izvi maficha zvinovimbisa zvakakodzera ganda kutendeka uye kubatsira kudzivirira kumanikidza maronda uye maronda.
Ergonomic Memory Foam hwiricheya Makuseni
Uyu mutsindo wakakwenenzverwa kuti unyore zviri nani chimiro chemuviri wako. Inogona kushandiswa seimwe Kumusana Cushion kana Seat Cushion, ndapota taura. Uyu mutsindo wakagadzirirwa kurumbidza furemu dhizaini yeErgonomic mavhiripu, asi inogona kushandiswa pane chero chigaro chakafara chakafanana. Usakanganwa kuwedzera iyo Ergonomic Contoured Memory Foam Backrest yekubatanidzwa kwekupedzisira kwekunyaradza.
Furo Kudzoka hwiricheya Makuseni
Iyo Karman Hutano hwiricheya Kumusana Cushion furo rakaputirwa Kumusana Cushion iyo inopa ekumusoro kumashure nyaradzo uye lumbar rutsigiro. Yakagadzirirwa kudzikisa marwadzo ekudzokera kumashure uye mhasuru kushushikana pawakagara kwenguva yakareba yenguva.
Wiricheya Push Mabhawa - Pazvibato